“” ကူလိုးပါရစေ မမ “” – Grab Love Story
ညီညီအောင်လည်း သူ့ကို ဒေါ်ခင်ပက အထာပေးနေတယ် ဆိုတာကို ရိပ်စားမိလိုက်တယ် ။ ဗန့်ဗွေးကုန်းကို မုဒိန်းမှူ အတွက် သွား စုံစမ်းစစ်ဆေး လို့ပြီးရင် ကျွန်းတောကုန်းရွာကို လာခဲ့..သူ့အိမ်မှာ နား..ညနေ ထမင်းစားပြီးမှ ပြန်ဖို့ ဒေါ်ခင်ပက ပြောတယ်လေ ။ ညီညီအောင်လည်း မိန်းမ မလုပ်ရတာ ကြာနေပြီ ဆိုတော့ နွားသိုးကြိုးပြတ် ဆိုသလို တအား ထန်နေတော့ ဒေါ်ခင်ပလို ဖြူဖြူ သန့်သန့် တောင့်တောင့် မိန်းမတယောက်ကို ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ငြင်းမလဲ ။ ဒေါ်ခင်ပ သည်လင်မရှိတာ ကြာပြီ ။ စီးပွားကို လောဘတကြီး ဖိရှာနေခဲ့ရပြီး သည်ကိစ္စကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့တာက သမီးအိအိ တသက်ဘဲ ။ သိပ်ပြီး တောင့်တလိုလားခဲ့တဲ့ ရက်တွေနေ့တွေတော့ ရှိခဲ့ တာပေါ့ ။ ကျိတ်မှိတ်ခံစား ခဲ့ရတာ ။ အခုလို ယောက်ျားပီသတဲ့ စခန်းမှူး ညီညီအောင်လို လူရွယ်တယောက် နဲ့ ဆုံဆည်းရတာက ဒေါ်ခင်ပအတွက် တအား ပျော်စရာ ဘဲလေ ။ ညီညီအောင်ကို သူလိုချင်တာလေး ပစ်ကျွေး လိုက်ရင် တအား ကျေနပ် သဘောကျသွားပြီး ဒေါ်ခင်ပအတွက် အားကိုးအားထား ရမယ့် လင်ယောက်ျားတ ယောက် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတော့ ပေါ်တင်ဘဲ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တော့တယ်လေ ။ ညီညီအောင်ကလည်း သူမ ခင်းပေးလိုက်တဲ့ လမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျောက်ဝင်လာသည် ။
ဗန့်ဗွေးကုန်းရွာက အပြန် တွေ့ကြဖို့ သဘောတူလိုက်ကြသည် ။ ဒေါ်ခင်ပက ကုန်စုံဆိုင်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ နေသည် ။ ညီညီအောင်ကို ကုန်စုံဆိုင်ရဲ့ ထောင့်တနေရာမှာ ရှိတဲ့ ထမင်းစား စားပွဲမှာ ဟင်းမျိုးစုံနဲ့ ကျကျနန ပြင်ဆင် ကျွေးသည် ။ ဒေါ်ခင်ပနဲ့သမီးအိအိတို့က သူ့ကို ပြာပြာသလဲ ရိုရိုသေသေနဲ့ ပြုစုကြတဲ့အချိန် ရွာလူကြီးတွေက လည်း စားစရာတွေ သစ်သီးတွေ ယူလာပြီး ထမင်းစားပြီးချိန် စကားထိုင်ပြောကြသည် ။ အိအိသည် သူ့အမေ ဒေါ်ခင်ပလိုဘဲ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ တောင့်တင်းသည် ။ နုဖတ်စိုပြေတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ဒီ ကောင်မလေးက သူ့ကို ကြည့်ပုံရှုပုံက တမျိုးဘဲ လို့ ညီညီအောင်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်မိသည် ။ မျက်လုံးရွဲကြီးတွေ နဲ့ စိုက်ကြည့်တဲ့ပုံက စွဲမက်စရာ ။ ညီညီအောင် သည်ကနေ့ ဟိုဖက်ရွာက မုဒိန်းသမားကို ဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်တာကို ကျွန်းတောကုန်းရွာက ရွာလူကြီးတွေနဲ့ ဒေါ်ခင်ပတို့ အရမ်း အထင်ကြီးနေကြသည် ။ မနက်က မှုခင်းဖြစ် ညနေမှာ တရားခံကို လက်ရ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာမို့ ဖြစ်သည် ။ .
ညီညီအောင်ကတော့ ကျွန်းတောကုန်းရွာကို မြင်းလှည်းနဲ့ လာတုံး အကျင့်ခံရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေကြည်နဲ့ ကျင့်တဲ့ ကိုသောင်းရွှေတို့ရဲ့ ထွက်ချက်တွေကို အသံဖမ်းစက်လေးနဲ့ ဖမ်းထားပြီး နားကြပ်လေးနဲ့ ပြန်ဖွင့်နားထောင်ရင်း မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အသေးစိတ်တွေကို သေသေချာချာ နားထောင်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွခဲ့တာ ။ ရွာလူကြီးတွေက “ ဗိုလ်ကြီး..ဒီည ကျနော်တို့ ရွာမှာ အိပ်မှာ မဟုတ်လား ..ကျနော်တို့ ဗိုလ်ကြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေဖို့ အိမ်လွတ်တလုံးမှာ စီစဉ်ပေးပါမယ်…ကျနော်တို့ ရွာအနောက်ပိုင်းက ဗိုလ်ဝ ဆိုတဲ့လူက အိမ်ဆောက်ထားပြီး လူမနေသေးဘူး ..အိမ်က ပြီးနေပြီ…ဗိုလ်ကြီး ခိုင်းဖို့ ရအောင်နဲ့ အဖေါ်ရအောင် ရွာထဲက လူ ငယ်တယောက် ဗိုလ်ကြီးနဲ့ ခေါ်ထားဖို့ စီစဉ်ပေးပါမယ်…..” လို့ ပြောသည် ။ ညီညီအောင်လည်း “ ကျေးဇူးဘဲဗျာ…ဘယ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ကျောချစရာ နေရာတခုရရင် အိုကေပါတယ်….ကျနော့်အ တွက် ဘယ်သူမှ ထား မပေးပါနဲ့..ကျနော် တယောက်ထဲဘဲ နေချင်တယ်…” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
ဒေါ်ခင်ပနဲ့ အိအိက ညီညီအောင် တညအိပ်မယ့် ရွာအနောက်ပိုင်းက အိမ်ကို လိုက်လာပြီး အိပ်ရာအခင်းအကျင်း တွေ ပြင်ဆင်ပေးသလို ညဖက် ဆာရင် သောက်ဖို့ လဖက်ရည်ချိုကို ဓါတ်ဗူးနဲ့ ထည့်ထားပေးသည် ။ ကိတ်မုန့် မျိုးစုံကိုလည်း အဆင်သင့် ထားပေးသည် ။ ရွာလူကြီးတွေ ပြန်သွားတဲ့အချိန် မှောင်စပြုပြီ ။ ဒေါ်ခင်ပ အိအိနဲ့ သူတို့အိမ်မှာ ဆိုင်ကူရောင်းတဲ့ နော်စေးစေး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတို့ဘဲ ကျန်ခဲ့သည် ။ ဒေါ်ခင်ပက “ ကဲ သမီး…စေးစေးနဲ့ အိမ်ပြန်နှင့်တော့..မေမေ….စခန်းမှူးကြီးနဲ့ စကား ခဏ ပြောပြီး ပြန်ခဲ့မယ် ” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ အိအိလည်း “ ဟုတ်ကဲ့မေမေ….ဒါဆို သမီးတို့ ပြန်လိုက်မယ်….အကို..အိအိ ပြန်တော့ မယ်…မနက်ကျရင် စားဖို့ တခုခု လာပို့မယ်နော်….ကောက်ညှင်းပေါင်း စားတယ် မဟုတ်လား..” လို့ ပြောပြီး က ရင်မလေးနဲ့ အိမ်လေးပေါ်က ဆင်းသွားသည် ။ သူက “ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်..အိအိ…ဒုက္ခမရှာပါနဲ့….ကျေးဇူးပါ…” လို့ ပြန်ပြောရင်း အိအိတို့ကို လှေခါးထိပ် အထိ လိုက်ပို့လိုက်သည် ။
“ ကိုညီ ….” “ မမ…” သူတို့ အခေါ်အဝေါ်တွေ နေ့လည်ကထဲက ပြောင်းကုန်သည် ။ အမကြီးလို့ မခေါ်ပါနဲ့လား…လို့ ဒေါ်ခင်ပက သူ့ ကို ပြောလို့ သူက ..မမ…လို့ ပြောင်းခေါ်လိုက်သလို “ စခန်းမှူးကြီး” လို့ ခေါ်နေတာကို မခေါ်ဖို့ ပြောလိုက်တာ ကြောင့် ဒေါ်ခင်ပ က သူ့ကို ကိုညီ လို့ ပြောင်းခေါ်ခဲ့ပါသည် ။ “ မမ မပြန်သေးဘဲ နေခဲ့တာ..ကျနော် အရမ်း ဝမ်းသာသွားတာဘဲ …” “ ဟင်းဟင်း….ဘာလို့လဲ ကိုညီရဲ့…” “ မမနဲ့ အခုလို နှစ်ယောက်ထဲ ရှိချင်လို့ပေါ့….” “ ဘာလို့ ရှိချင်တာလဲ…” “ မမကို ကျနော့်ခံစားချက်တွေ ပြောပြချင်လို့ပေါ့…” ဒေါ်ခင်ပက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ မခို့တရို့ ကြည့်ရင်း..“ ဆိုပါအုံး ဆရာကြီးရယ်…ဘာ ခံစားချက်တွေလဲရှင်….” လို့ မေး လိုက်တဲ့အချိန် ညီညီအောင်က သွက်လက်စွာနဲ့ ဒေါ်ခင်ပ အနားကို တိုးကပ်သွားပြီး ဒေါ်ခင်ပကို ဖက်လိုက်သည်။ “ အို..ကိုညီ…ဘာလုပ်တာလဲ…” “ မမကို ကျနော် ချစ်တယ်ဗျာ..မမလည်း ကျနော့်ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လားဟင်…” “ အိုး…ကဲလိုက်တာ….အာ…ဘာလို့ နမ်းတာလဲ…” “ ချစ်လို့….” ဒေါ်ခင်ပရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ တေ့ကပ်ပြီး စုတ်ယူလိုက်သည် ။ ဒေါ်ခင်ပသည် ညီညီအောင့် ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော့ကျသွားသည် ။
မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားရင်း ။မုဆိုးမ အဖြစ် ယောက်ျား မရှိဘဲ နေခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ပသည် အရမ်းကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတာမို့ ညီညီအောင်ပြုသမျှ နုလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာကြောင့် ညီညီအောင့်ကို သူမကိုယ်ခန္ဓာကို သဘောရှိ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ဖို့ထိုးအပ်လိုက်ပြီ ။ ညီညီအောင်က အတွင်းခန်းက ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဒေါ်ခင်ပကို ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရင်း လင်းထိန်နေတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ အကြာကြီး စူးစိုက်ကြည့်နေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပလည်း ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ပက်လက် လှဲကာ မျက်စိတွေ စုံပိတ်ထားရာက ဖျတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ညီညီအောင်က တောက်ပ တဲ့ ကာမခိုးလျံနေတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့သွားပြီး ရှက်သလို အမူအရာနဲ့ သူမပေါင်တန်တွေ ကြားထဲက မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်း အင်္ဂါစပ်ကြီးကို လက် နဲ့ အုပ်ကာလိုက်သည် ။ “ အိုးးး…ဘာကြည့်တာလဲ…” လို့လည်း ပြောလိုက်သည် ။
ညီညီအောင်က “ လှလွန်းလို့ ကြည့်နေတာပါ…မမရဲ့တကယ်ဗျာ..မမက နုလည်းနု…တောင့်လည်းတောင့်…တောက်…တကယ့်ရှယ်ဘဲ….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်ခင်ပရဲ့ပေါင်တန်တွေကို လက်နဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်လိုက်ပါသည် ။ ညီညီအောင်သည်လည်း ကိုယ်ပေါ်မှာ ဗလာနတ္တိ ။လီးတန်ကြီး ထောင်မတ်လျက် ဖြစ်နေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပလည်း ညီညီအောင်ရဲ့ ထွားတုတ်ရှည်လျားတဲ့ လီးတန်ကြီးကို မသိမသာ ဖျတ်ကနဲ ခိုးကြည့်လိုက်သည်။ အမလေး…ကြုံမှကြုံတတ်တယ်….သွားလေသူကြီးရဲ့ ဒုတ်ထက် ပိုကြီးပိုရှည်နေတယ် …။ ညီညီအောင်က အုပ်ထားတဲ့ ဒေါ်ခင်ပရဲ့ လက်ကို အသာ ဖယ်လိုက်ပြီး ဆီးခုံမို့မို့ကြီးကို ကိုင်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ခင်ပသည် စောက်ဖုတ်မွှေးတွေကို ကပ်ကြေးနဲ့ ပါးထားဟန်တူသည် ။ “ အင်း…..” ဒေါ်ခင်ပ ပါးစပ်က အသံလေး ထွက်လာသည် ။ အင်္ဂါစပ်ကြီးရဲ့ အကွဲကြောင်းကို ညီညီအောင်က ပွတ်ပေးနေပြီ ။ အင်္ဂါစပ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူနှစ်ချပ်က မသိမသာလေး ပွင့်ဟလို့နေတာ အတွင်းသား ရဲရဲလေးတွေကို မြင်နေရတာက ညီညီအောင်ရဲ့ ကာမစိတ်တွေကို ပိုထကြွစေသည် ။
လက်တဖက်က အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ပွတ်နေသလို သူ့ကျန်တဲ့ လက်တဖက်က ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို ကိုင်နယ်နေသည် ။အင်္ဂါစပ်ကြီးသည် သူစကိုင်လိုက်ကထဲက ကာမရှေ့ပြေး အရည်တွေ စိုပေနေခဲ့သည်။ ကိုင်ရင်းကိုင်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရည်တွေ ယိုစီးစိမ့်ထွက်လာနေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပသည် သူ့နှိုးဆွမှုတွေကို ခံယူနေရင်း ကာမစိတ်တွေ ထသထက် ထလာနေပြီ ဆိုတာကို ညီညီအောင်က သိလိုက်သည် ။ “ ကဲ..မမ….မမကို ကျနော် ချစ်ပေးတော့မယ်….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ပေါင်တန်တွေ အကြားကို နေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့ ညီညီအောင်က သူ့လီးတန်ကြီးကို လက်တဖက်နဲ့ ကိုင်ရင်း အင်္ဂါစပ်အကွဲကြောင်းကို စုန်ချီဆန်ချီ ပွတ် ဆွဲလိုက်သည် ။ သူ့လီးတန် ထိပ်ဒစ်လုံးကြီးသည် အင်္ဂါစပ်မှာ စိုပေနေတဲ့ အရည်တွေ ပေလူးသွားတဲ့အခါ ညီညီအောင်က လီးတန်ကြီးကို အင်္ဂါစပ်အပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည် ။
“ အို့……ဖြည်းဖြည်း…” ဒေါ်ခင်ပက သူ့အပေါ် တက်ခွထားတဲ့ ညီညီအောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးနဲ့ တွန်းရင်း ပြောလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်ကတော့ ဒေါ်ခင်ပရဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို မျက်နှာနဲ့ လူးလှိမ့်နေသည် ။ နို့သီးခေါင်း ညိုညိုလေးက တင်းမာပြီး ထောင်ထွက်နေသည် ။ ပြွတ်ကနဲ ငုံစို့ပေးလိုက်ရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို ဇွတ်ကနဲ သွင်းပစ်လိုက်တော့ “ အို့…မောင်ရယ်…” လို့ ဒေါ်ခင်ပ ပါးစပ်က အသံထွက်သွားသည် ။ အိစက်ပြီး စိုနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ညီညီအောင် စလိုးထည့်ပါတော့သည် ။ “ အိုး…အိုး……အိုး…….ဟင်..ဟင်………အား……အား…..” “ ဖွတ်ဖွတ်….ဖွတ်ဖပ်…ဖွတ်ဖပ်….ဖွတ်ဖပ်……” နို့လုံးထွားထွားကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ရင်း နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးတဖက်ကို တအားစုတ်ပြီး စောက်ဖုတ်အိအိကြီးကို တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ လိုးနေတဲ့အချိန် စောက်ခေါင်းထဲက လေအံသံ ဘွပ်ဘွတ် ဆိုတဲ့ အသံလည်း ထွက်လာသည် ။
ဒေါ်ခင်ပလည်း ညီညီအောင် နည်းတူဘဲ တအား ထန်နေပြီမို့ အရှက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ “လိုး..လိုး….မောင်…တအားလိုး…အီး….ရှီး….ကောင်းလိုက်တာ..လိုးပါ မောင်ရဲ့….” လို့ အော်ရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ပေးနေသည် ။ ညီညီအောင်ကလည်း မိန်းမ မလိုးတာ ကြာနေပြီမို့ တအား ထန်နေသလို ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးကို ရနိုင်ရင် လိုးချင်နေတာ ။ အားရပါးရ လိုးဆောင့်ထည့်နေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ လင် ဆုံးပါးသွားတာ နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီမို့အသားတက်ပြီး တင်းကြပ်နေသည် ။ လီးနဲ့ ပြတ်လပ်နေတာ ကြာလို့ လီးလည်းရရော ဒေါ်ခင်ပမှာ အရမ်းကို သဘောကျပြီး ညီညီအောင်နဲ့ အပြိုင်ကြဲပြီ ။ “ မ ဖင်တွေကို ကိုင်ပြီး လိုးစမ်းပါ မောင်ရယ်….” တောင့်တင်းတဲ့ ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးသွင်းနေတဲ့ ညီညီအောင်သည် အချက်တိုင်း ကောင်းနေသည် ။ စောက်ဖုတ်ကြီးက သူ့လီးကို ညှစ်ဆွဲယူနေသည်လို့ ထင်ရပြီး တအားနင်း ဆောင့်ထည့်တဲ့အခါ ပြီးချင်လာသည်လို့ စိတ်မှာ ထင်မိလိုက်လို့ အရှိန်ကို နည်းနည်း လျော့လိုက်သည် ။
ဒေါ်ခင်ပက “ မလျော့လိုက်နဲ့ မောင်..လိုးပါ..တအားကြမ်းကြမ်းလေး လိုးပေးစမ်းပါ…အမလေး…ရှီး…ဆောင့်…ဆောင့်…” လို့ ပြောရင်း ဖင်ကြီးတွေကို မွှေ့ရမ်းပြီး ကော့ပေးနေလို့ ညီညီအောင်လည်း ဆောင့်အားကို ပြန်လည် မြှင့်တင်လိုက်သည် ။ အသားကုန် ဆောင့်ထည့်လိုက်သည် ။ ဖင်ကြီးတွေ ဝှေ့ရမ်းရင်း ကော့ပင့်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ပ သည် ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းတွေကြောင့် တအားကောင်းလွန်းသွားရပြီး ညီညီအောင်ကို တအားကြုံးဖက်ရင်း အထွဋ်အထိပ်ကို တက်လှမ်းသွား ရသည် ။ “ အိုး…အိုး……..အား………အိုး…….” “ ဟင်းဟင်း..ဟင်း…….အင်း…” ညီညီအောင်က ဖိဆောင့်နေဆဲ ။ “ ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ်….အိုး…….ဟင်း…..ဖပ်ဖပ်ဖပ်..ဖွတ်ဖွတ်…..” ဒေါ်ခင်ပရဲ့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားတွေက သူ့လီးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဆုပ်ညှစ်လျက် ရစ်ပတ်ဆွဲယူနေလို့ ထိန်းထားလို့ မရတော့ဘဲ သုတ်ရည်တွေ တဖတ်ဖတ်နဲ့ ထုတ်လွှတ် ပန်းထွက်ကုန်သည် ။ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း နှစ်ယောက်စလုံး ကောင်းကြတဲ့ ပထမဆုံး ကာမပွဲလေး…ပြီးဆုံးသွားသည် ။ ဒေါ်ခင်ပ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သူ့လီးကို တဆုံးထိုးသွင်းထည့် စိမ်ထားရင်း ညီညီအောင် တရှူးရှူး အသက်ရှူနေသည် ။
သူတို့နှစ်ယောက် မသိတာက ဒေါ်ခင်ပ တယောက်ထဲ အမှောင်ထဲ ပြန်လာရမှာကို စိတ်ပူ စိတ်မချတဲ့ သမီး အိအိက အမေကို ပြန်လာခေါ်တဲ့အချိန် အိမ်အောက်ကို ရောက်ကထဲက အမေဖြစ်သူနဲ့ ညီညီအောင်တို့ရဲ့ အသံဘလံတွေကို ကြားလိုက်လို့ အသာခြေဖေါ့နင်းပြီး ကြူထရံနား ကပ်နားထောင်လို့ သူတို့ပြောတာဆိုတာတွေကို သေသေချာချာ ကြားသွားသည် ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ အိအိလည်း ကြားနေရတာတွေကို မြင်တွေ့ချင်လာပြီး သူတို့ ရောက်နေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို အပေါက်ရှာကာ ချောင်းကြည့်တဲ့အတွက် မိမွေးတိုင်း ဗလာကိုယ်တွေနဲ့ ထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့ သူတို့ကို တွေ့သွားရသည် ။ တဏှာစိတ်တွေ ပြင်းပြနေတဲ့ အမေကို အံ့သြမိရသလို တုတ်ထွား ရှည်လျားတဲ့ လီးကြီးနဲ့ အလိုးအဆောင့်ကောင်းတဲ့ ညီညီအောင်ကိုရော တဝကြီး ရှုစားလိုက်ရလို့ အိအိသည် အင်္ဂါစပ်တခုလုံး စိုစိုရွှဲနေရအောင်ဘဲ စိတ်တွေ တအား လာနေရပေသည် အမေ ပြီးတော့ သမီး ဒေါ်ခင်ပရဲ့ လှည်းနဲ့ ညီညီအောင်နဲ့ တပည့်နှစ်ယောက် သည် အရင်ဆုံး ကျွန်းပင်ကုန်းရွာကို ပြန်ရောက်သွားပြီး ဒေါ်ခင်ပ အိအိနဲ့ ရွာလူကြီးတွေက အနီးဆုံး ဆေးခန်းက ကျန်းမာရေးမှူးတွေ သူနာပြုတွေကို ပြေးခေါ်ပေးကြပြီး သူတို့ရဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကို ဆေးထည့် ပတ်တီးစည်းပေးကြသည် ။
ဘိုတဲမှာထဲက ညီညီအောင်က သူ့တပည့် ရဲသား နှစ်ယောက်ကို မိတောကို သူ ကြံစည်တာတွေကို လုံးဝ မပေါက်ကြားစေဖို့ ပိတ်ထားခဲ့သည် ။ ညီညီအောင်သည် အလုပ်အရ ကိုင်ဆောင်တဲ့ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ် သုံးလက်..မသမာသူတွေရဲ့ လက်ကို ပါသွားတဲ့အတွက် ဌာနဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုကို ခံရပြီ ။ ညီညီအောင်နဲ့ သူ့တပည့် ရဲသား နှစ်ယောက်သည် မိတောကို ညီညီအောင်က အတင်း အဓမ္မ ဘလက်ကာယ လုပ်တယ် ဆိုတာကို ဖုံးထားပြီး မသက်ာလို့ စစ်မေးနေတုံး သူတို့ တောင်ပေါ်က ရွာပုန်းက လူတွေ တပုံကြီး ရောက်လာပြီး အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ကြသည် …သေနတ်တွေ လုယူသွားပြီး မိတောကို ကယ်သွားသည် လို့ တင်ပြကြသည် ။ အထက်လူကြီးတွေက ဝတ်မှုံရွှေကြည် မုဒိန်းမှုကို တရားခံဖမ်းနိုင်လို့ ချီးကျူးကာမှ မကြာသေး..လူဆိုးတွေ လက်ထဲကို သေနတ်တွေ ပါသွားတာ အတွက် စုံစမ်း စစ်ဆေး တာတွေ ကို ခံရပြီ ။ ညီညီအောင်က သည် တောင်ပေါ်နေ တောပုန်းတွေကို သူ အပြတ်ရှင်း ဖမ်းဆီးပေးမည်လို့ ဂတိပေးသည် ။ သူ့တပည့်တွေကိုလည်း အရပ်ဝတ်နဲ့ ကျွန်းတောကုန်း အပါအဝင် တောင်ခြေက ရွာတွေဖက်ကို လွှတ်ပြီး သည် တောင်ပေါ်က လူစု လာခဲ့ရင် ဖမ်းဆီးဖို့ ပြင်ဆင်သည် ။ မကြာခင် တောနင်းပြီးတောင်ပေါ်ကို တက်ရှင်းမည် လို့လည်း သူ ကြံစည်နေသည် ။ ခရိုင်ရဲမှူးက အများနဲ့ လူနည်းစုမို့ခံလိုက်ရတာကို အပြစ်မပြော ။ ညီညီအောင်ကို အထပ်ထပ် မေးတဲ့ မေးခွန်းက “ ဘာကြောင့် မိတောကို ကျွန်းတောကုန်းရွာမှာဘဲ မစစ်ဆေးဘဲ တောစပ်က ဘိုတဲကြီးဆီကို ခေါ်သွားပြီးစစ်ရတာလဲ …” ဆိုတာ ဖြစ်သည် ။
ညီညီအောင်ကလည်း လူတွေရှေ့ မစစ်ချင်လို့..လွတ်လွတ်လပ်လပ် စစ်ချင်လို့…သူ့ဆီက ရတဲ့ သတင်းတွေ အရ တောင်ပေါ်ကို လိုက်မလို့ ဘာညာနဲ့ ဆင်ခြေပေးသည် ။ ရဲမှူးက သူ့ အဖြေကို သိပ် ဘဝင်မကျ . .။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ညီညီအောင်ကို အပြစ်မကျအောင်..စစ်ဆေးမှု အမြန်ပြီးအောင် ခရိုင်ရဲမှူးက ထောက်ခံပေးသည် ။ ညီညီအောင်က ရဲမှူး အိမ်ကို အဝင်အထွက် ရှိခဲ့သည် ။ ရဲမှူး ကတော်ကို လိုအပ်တဲ့ ဆီပုံး ဆန်အိတ် ငါးခြောက် ကြက်သွန်တွေကို အလိုက်တသိ ပို့ပေးခဲ့သည့် မျက်နှာက ရှိနေသည် ။ ရဲမှူးက တောင်ပေါ်က ရွာပုန်းကို ရှင်းလင်းဖို့ကိုလည်း သဘောတူသည် ။ အရင်ဆုံး သူတို့ရဲ့ လူအင်အား..လက်နက် အင်အားကို လေ့လာ ထောက်လှမ်းဖို့ မှာကြားသည်။ ရဲစခန်း ဝင်းအနောက်ဖက်က ခြေတန်ရှည် သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင်အိမ်လေး မှာ ညီညီအောင် နေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပနဲ့ သမီး အိအိတို့သည် ဖြစ်ခါစ ရက်တွေမှာ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တွေ ရထားတဲ့ ညီညီအောင့်ကို လာကြည့်ကြသည် ။ ထမင်းဟင်းတွေ ချက်လာကြပြီး ငါးဆင့်ဂျိုင့်ကြီးနဲ့ ထည့်လာပြီး ကျွေးကြသည် ။ အခုညီညီအောင့်ဆီကို ဒေါ်ခင်ပ မလာနိုင်လို့ သမီးအိအိကို လွှတ်ပြီး စားစရာတွေ ပို့ခိုင်းသည် ။ နေကောင်းလာပြီလား ဆိုတာလည်း မေးခိုင်းသည် ။
ဒေါ်ခင်ပသည် ညီညီအောင်နဲ့ တည ညိစွန်းခဲ့ကြပြီးနောက် အခုထိ နောက်ထပ် တခါမှ ထပ်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မတွေ့ဖြစ်ကြလို့ အရမ်းဘဲ တွေ့ချင်နေသည် ။ သို့ပေမယ့် ညီညီအောင်ကလည်း အမှုရင်ဆိုင်နေရလို့ စိတ်ညစ်ငြူးနေပုံရသည် ။ ဒီနေ့လည်း ဆိုင်မှာ အလုပ်များလွန်းလို့ သမီးအိအိကိုဘဲ ညီညီအောင့်ဆီကို လွှတ်လိုက်သည် ။ ညီညီအောင်သည် သူ့အိမ်လေးမှာ စာအုပ်တအုပ်နဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း နားနေခိုက် သူ့အိမ်ရှေ့ကို မြင်းလှည်းတစီး လာဆိုက်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ အိအိ ဖြစ်နေလို့ ထိုင်ရာက ထပြီး ဆင်းကြိုလိုက်သည် ။ အိအိက “ အမေက အကို့သတင်းကို မကြားရလို့ စိတ်ပူနေပြီး အိအိကို စားစရာတွေ ပို့ခိုင်းတယ် အကို…အကိုနေကောင်းတယ် မဟုတ်လား….” လို့ မေးရင်း အထုပ်တွေ ဂျိုင့်တွေကို မြင်းလှည်းပေါ်က ချသည် ။ မြင်းလှည်းမောင်းတဲ့ လူ ကို နေ့လည်စာ သွားစားခိုင်းလိုက်သည် ။ စားပြီးရင် ရဲစခန်းရှေ့မှာ စောင့်နေဖို့လည်း မှာနေသည် ။ “ လာ..အိအိ…အိမ်ပေါ် တက်ပါအုံး…..” “ ဟုတ်…” အိအိကို သူ့အိမ်လေးပေါ်ကို ခေါ်လိုက်သည် ။
အိအိက စားစရာထုပ်တွေ ဆွဲပြီး ညီညီအောင်နဲ့အတူ အိမ်လှေခါး အတိုင်း တက်ခဲ့သည် ။ တယောက်ထဲသမားမို့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း နေနေတဲ့ ညီညီအောင်ရဲ့ အိမ်က ရှုပ်ပွနေ သည် ။ အိအိက “ မဖြစ်သေးပါဘူး..အိ…အကို့အိမ်ကို သေသေချာချာ ရှင်းလင်းပေးအုံးမှပါဘဲ..” လို့ ညည်းသလိုလေး ပြောလိုက်သည် ။ “ ထားလိုက်ပါ..အိအိရယ်…အကို နောက်မှ ရှင်းမယ်…..အိအိနဲ့ မတွေ့တာ ကြာပြီ …ထိုင်ပါအုံး….အိအိနဲ့ စကားပြောကြရအောင်……” ဧည့်ခန်းလေးက ကုလားထိုင်တွေမှာ ထိုင်ကြရင်း အိအိနဲ့ စကားတွေ ပြောကြရင်း ညီညီအောင်သည် သူ့အိမ်ထဲမှာ အိအိနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ နီးနီးကပ်ကပ် ရှိနေတာကြောင့် စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်လာသည် ။ သည်လိုအခွင့်အလမ်းမျိုးကို သူ စောင့်နေတာ ချောင်းနေတာ ကြာပြီ ။ အိအိ လက်ကလေးကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်ပြီး..“ အိအိ ရယ်…အိအိကို တအား ချစ်တယ်…ချစ်မိနေတယ်….အိအိ….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ တကယ်တော့ အိအိမှာလည်း မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေတဲ့ ကောင်မလေး ပါ ။ ညီညီအောင်ကို စတွေ့ကြထဲက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာ ။ အမေနဲ့ ကာမလွန်ကျူးကြတာကိုလည်း ချောင်းကြည့်မိလို့ သိနေပြီး အဲဒီတုံးကမြင်တွေ့ဖူးခဲ့ရတဲ့ ကိုညီညီအောင်ရဲ့ အဝတ်မဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ခဏခဏဘဲ မြင်ယောင်မိခဲ့ပြီး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားပြင်းပြခဲ့ရသည် ။ ညီညီအောင်က ဖြူဖွေးနူးညံ့တဲ့လက်ကလေး ဆုပ်ကိုင်ရာက အိအိ ဘေးနားကို ရွှေ့ထိုင်လိုက်ပြီး ဆွဲ ဖက်လိုက်သည် ..။
“ အို့..အကို…..” “ ချစ်တယ်..အိအိရယ်..အကို့ကို ပြန်ချစ်ပါ ….” ဖက်လည်းဖက် ပြောလည်းပြော နမ်းလည်း နမ်းသည် ။ အိအိလည်း မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ကြုံလိုက်ရလို့စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှား သွားရပေမယ့် ဒီလို အခြေအနေကို အိအိ ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်ချင်နေတာ မဟုတ်လား ။ အကိုညီညီအောင်နဲ့ ခုလို ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ရတာ အခါခါလေ ။ အကိုက အိအိနှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ယူနမ်းတော့ အိအိရဲ့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါကုန်သည် ။ ကြက်သီးတွေ ထတာ အရမ်း ။ “ အကို့ကို ပြန်ချစ်တယ် မဟုတ်လား..ပြော….ပြော..အကို့ကို ချစ်တယ် လို့..” ညီညီအောင်က အိအိကို တအားဖက်ထားပြီး အိအိရဲ့ လည်တိုင်ကို နမ်းစုတ်နေရင်းနဲ့ မေးသည် ။ အိအိလည်းသူ့ကို “ အကို့ကို အိအိလည်း ချစ်တယ်….” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်က အိအိကို နမ်းလိုက် စုတ်လိုက် ကိုင်လိုက် ပွတ်လိုက် လုပ်ပြီ ။ အိအိရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ပြီး အိအိရဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို လက်နဲ့ အသာ ပွတ်သပ် ဆုပ်နယ်ပေးတော့ အိအိသည် သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ပျော့ကျ မှီခိုလာပြီး သူလုပ်သမျှကို ကျေနပ်စွာနဲ့ ခံယူနေသည် ။ ညီညီအောင်လည်း အိအိ လက်ခံတာကို တွေ့ရလို့ စိတ်အား ပိုတက်ကြွလာရပြီး အိအိရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကိုပါ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လိုက်မိသည် ။ အိအိလည်း ဒီလို အကိုင်အတွယ်တွေကြောင့် စိတ်တွေ နိုးကြွလာရပြီး ညီညီအောင့်ကို ပြန်သိုင်းဖက်ရင်း “ အကို..အိအိကို ယူမှာလားဟင်….” လို့ မေးလိုက်သည် ။
ညီညီအောင်က အိအိရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ် စုတ်ယူလိုက်သည် ။ အိအိ မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကို ညီညီအောင် မဖြေတော့ ။ အိအိလည်း ထပ်ပြီး မမေးနိုင်တော့ ..။ ညီညီအောင်ရဲ့ လျာက အိအိ ပါးစပ်ထဲကို ရောက်ပြီး အိအိရဲ့ လျာလေးကို ကလိနေသည် ။ သူ့လက်တွေကလည်း အိအိရဲ့ အင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပစ်နေသည် ။ အိအိသည် သူ့အနမ်းတွေမှာ မိန်းမောနေတုံးမှာ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေသည် တခုပြီး တခု ကွာကျ ပြေကျွတ်ကုန်သည်။ ညီညီအောင်က ဗလာကျင်းသွားတဲ့ အိအိရဲ့ ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းက ဖွံ့ထွား လုံးဝန်းတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ့မျက်နှာနဲ့ ဖိပွတ်နေရင်း နို့သီးခေါင်းမာမာ စူစူလေးကို စို့လိုက်သည် ။ဒီအချိန်မှာ အိအိရဲ့ စောက်ဖုတ် တခုလုံး အရည်တွေနဲ့ ရွှဲနစ်နေပြီ ။ ညီညီအောင်က နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်ဆုပ်ပေးလိုက် နို့သီးထောင်ထောင်လေးတွေကို တလှည့်စီ စို့ပေးလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးရာက သူ့လက်တဖက်နဲ့ အိအိရဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ အိအိလည်း စိတ်တေါ တအား ထကြွနေပြီမို့ ညီညီအောင် ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တာကို သိရက်နဲ့ မဆွဲမတားတော့ဘူး ။ တကိုယ်လုံး ဗလာကျင်းသွားပြီ ။ ညီညီအောင်က နို့ကြီးနှစ်လုံး ဆီကနေ သူ့ကိုယ်ကို အောက်ဖက်ကို လျောဆင်းလိုက်သည် ။
အိအိရဲ့ ဝမ်းပြင်သား အိအိလေးတွေကို မျက်နှာနဲ့ မွှေ့ရမ်းလိုက်ပြီး အောက်ဖက်ကို ထပ် ဆင်းလိုက်တဲ့ အခါ အမွှေးပါးပါးလေး ပေါက်နေတဲ့ ဆီးခုံမို့ မို့ကြီးဆီကို ရောက်သွားရသည် ။ “ အိုး…ဟင်း………အကို……” စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီးကို နှာခေါင်းနဲ့ ထိုးရှူလိုက်လို့ အိအိရဲ့ နုတ်ဖျားက အသံလေး ထွက်လာသည် ။ ညှီစို့စို့ အနံ့လေးက ထောင်းကနဲ ထွက်လာသည် ။ သည် အနံ့လေးက ညီညီအောင်ရဲ့ ကာမ ရမက်တွေကို တဟုန်ထိုး ထကြွသွားစေသည် . စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေကို သူ့လက်တဖက်နဲ့ ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး သူ့လျာကြီးကို ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ “ အို့….အာ့…..” စောက်စိလေးကို လျာထိပ်နဲ့ ကလော် ထိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားလို့ အိအိ တအား ဖီလင်တက်သွားသည် ။ တုန်ခါသွားရသည် ။ အိအိရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ဖြဲကားတွန်းထားပြီး စောက်ဖုတ်ကို လျာအပြားလိုက်နဲ့ ယက်ပေးပြီ ။
“ အိုး…အား….အား…အား….အား…….အား……” အိအိ အော်ညည်းသံတွေ ဆက်တိုက် ကြားနေရသလို သူ့ စောက်ဖုတ်ယက်တဲ့ အသံကလည်း ပြတ်ပြတ်ပြိပြိနဲ့ ထွက်နေသည် ။ ရဲသား ထွန်းရွှေသည် ရဲစခန်းထဲမှာ တာဝန်ကျနေတုံး သူတို့မြို့က ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင် တယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုစိန်ကိုးတို့ မိသားစုက တရုတ်နှစ်ကူး အတွက် ကျွေးတဲ့စားစရာတွေ နဲ့ ရောက်လာကြပြီး စခန်းမှူးကို မေးကြသည် ။ သူက စခန်းမှူး မရှိဘူး…ထားခဲ့လိုက်လို့ ပြောလိုက်ပြီး စားစရာအထုပ်တွေကို စခန်းမှူး အိမ်ကို သွားပို့ဖို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည် ။ ခါတိုင်းဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အိမ်ရှေ့ တံခါးကို မပိတ်တဲ့ စခန်းမှူးရဲ့ အိမ်မှာ တံခါးကြီး ပိတ်လို့ နေလို့ ထွန်းရွှေလည်း ထူးဆန်းသွားသည် ။ ဘာလို့ တံခါးကြီး ပိတ်ထားပါလိမ့်…။ အိမ်ရှေ့က လှေခါးလေးကနေ တက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အိမ်ထဲက အသံဘလံတွေကို ကြားလိုက်ရသည် ။ အင်းအဲဖွတ်ဖပ် အသံတွေ ။ အပီကိုင်နေတာ ။ ဟိုက်..ဆရာသမားတော့ အပြတ်ကိုင်နေပြီ….ဘယ်စော်ကို ခေါ်ဖြုတ်နေပါလိမ့်…..။ ထွန်းရွှေလည်း တအား စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ သူထင်တာက ဒေါ်ခင်ပ ဖြစ်မည်လို့ ။ ဒါမှ မဟုတ် မုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေကြည် ဆိုတဲ့ ကောင်မ ချောချောလေး များလား ။ စခန်းမှူး ညီညီအောင်က သည် ကောင်မလေး အကျင့်ခံရတာကို သေ သေချာချာ အသေးစိတ် ထပ်ခါထပ်ခါ မေးနေခဲ့တာတွေကို သိသည် ။ သူ ကြားချင်နေတာ..နား အရသာ ခံနေတယ် ဆိုတာကို ပေါက်သည် ။
သဘောပေါက်သည် ။ အင်း…စခန်းမှူးရဲ့ ဝါသနာက မသေးဘူးလေ။ သိတာပေါ့ ။ မိတော ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်က အရိုင်းမလေးကိုလည်း ဘိုတဲကို ခေါ်သွားပြီး အတင်း ကြမ်းတာ ။ သေနတ်သုံးလက် ပါသွားပြီး အရိုက်ခံခဲ့ရတာ မမှတ်သေးဘူးလား မသိဘူး ။ ကံကောင်းလို့ တောသားလေးက သူ့ဖင်ကို တက်ချမသွားတာ။ အားလုံး ဝိုင်းတားကြလို့ ။ စခန်းမှူး ဆော်နေတာကို ကြည့်ချင်စိတ်တွေ အရမ်း ဖြစ်နေလို့ ထွန်းရွှေလည်း အထဲကို ချောင်းကြည့်ဖို့ ကြိုးစားတော့သည် ။ သည်အိမ်တွေက သစ်သား နံရံတွေမှာ သံရိုက်ရာတွေ အများကြီး ရှိနေတာမို့ အထဲကို မြင်နိုင်တဲ့ အပေါက်တွေ အများကြီးဘဲ ။ ပထမ အပေါက်လေးကနေ ချောင်းလိုက်တော့ စခန်းမှူး ရဲ့ ခြေထောက်နဲ့ မိန်းမတယောက်ရဲ့ ခြေထာက်ကိုဘဲ တွေ့ရသည် ။ ချောင်းလို့ အားမရတာကြောင့် နောက်တပေါက်ကို ထပ် ရှာရသည် ။ ဒီတခါတော့ သဲသဲကွဲကွဲ တွေ့ရသည် ။ ဒေါ်ခင်ပ မဟုတ်ဘဲ သူ့သမီး အိအိ ဖြစ်နေပါလား….။ အိအိရဲ့ ထွားထွား တောင့်တောင့် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တွေကို တွေ့လိုက်ရလို့ ထွန်းရွှေလည်း မျက်လုံးပြူးသွားသည် ။ လီးလည်း ချက်ချင်း မတ်လာသည် ။ အိအိရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ထားရင်း တရှူးရှူးနဲ့ ဖိဆောင့်နေတဲ့ စခန်းမှူးရဲ့ တကိုယ်လုံး ချွေးတွေ ရွှဲနေတာကိုလည်း တွေ့ရသည် ။ သူ့လီးတန် ညိုညိုကြီး တပြိပြိနဲ့ အိအိရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လိုးနေတာ ဝင်ထွက်နေတာကို သေသေချာချာ မြင်နေရသည် ။ ထွန်းရွှေလည်း သူ့ပေါင်ကြား ဘောင်းဘီထဲက တောင်နေတဲ့ လီးကို ဘောင်းဘီ အပေါ်ကဘဲ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်နေမိရသည် ။
အိအိကို တအားဆောင့်နေတဲ့ ညီညီအောင်သည် တင်းကြပ်ပြီး စိုအိနေတဲ့ အိအိရဲ့ စောက်ဖုတ်က လိုးတဲ့ အချက်တိုင်း ကောင်းလွန်းနေလို့ ဆက်ပြီး ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရည်တွေ တပုံကြီး ပန်းထွက်သွားပြီး အိအိ အပေါ်ကို မှောက်ရက်သား လဲကျသွားသည် ။ညီညီအောင်သည် အိအိ ခဏခဏ သူ့အိမ်ကို လာကုန်းနေလို့ မပြတ်တမ်း လိုးနေရသည် ။ ဒီနေ့လည်း အိအိ လာလိမ့်မည်လို့ သူ ထင်ထားလို့ မျှော်နေသည် ။ ရောက်လာတော့ အိအိ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်ခင်ပ ဖြစ်နေသည် ။ ညီညီအောင် အတွက်ကတော့ အိအိ မဟုတ်လည်း ဖြူဖြူတောင့်တောင့် ဒေါ်ခင်ပကို လိုးဖို့က အဆင်သင့်ပါ ။ “ မောင်….မမကို လွမ်းလားဟင်..မမတော့ မောင်နဲ့ မတွေ့ရလို့ တအား လွမ်းနေတာဘဲ ….” လို့ ဒေါ်ခင်ပက သူ့ ကို ပြောတော့ “ မမရယ်…မမကို လွမ်းလိုက်ရတာဗျာ….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်ခင်ပကို ချက်ချင်းဘဲ သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်သည် ။ “ ဟိတ်….ကဲလိုက်တာ လူဆိုးလေး….” ဒေါ်ခင်ပက တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်ရင်း ညီညီအောင် ဆွဲခေါ်ရာကို ပါသွားသည် ။
“ ကဲ….မမ….အဝတ်တွေ ချွတ်ဗျာ….မမနဲ့ ချစ်ချင်လှပြီ …” “ အမလေး…မောင်ရယ်..သဲလိုက်တာ..ဖြည်းဖြည်းပေါ့..မောင်နဲ့ တွေ့ဖို့ရာ မမ အရောက်လာခဲ့ပြီဘဲ…..” အိအိကိုဘဲ ဆက်တိုက် လိုးနေရလို့ အခုလို ဒေါ်ခင်ပနဲ့ လိုးရမှာကို ညီညီအောင် သဘောကျနေသည် ။ ဒေါ်ခင်ပ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေ အားလုံးကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဝတ်တွေ ကို အမြန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ဗလာကိုယ်တွေနဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်ကြတဲ့ အချိန် ဒေါ်ခင်ပက ညီညီအောင့် လီးကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး…“ မမ စုတ်ပေးမယ်နော်…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်လည်း ပက်လက်လှဲအိပ်ချ လိုက်သည် ။
မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ဒေါ်ခင်ပ ပါးစပ်နဲ့ ငုံလိုက်ပြီး တပြိပြိနဲ့ စုတ်ပေးပြီ ။ သည်လီးကြီးနဲ့ ဝေးနေတာ ကြာပြီမို့ ဒေါ်ခင်ပလည်း အရမ်းကို ဆာလောင်နေတဲ့အချိန် အခုလို စုတ်ခွင့်ရလိုက် လို့ အားရပါးရ စုတ်ပေးနေပြီ ။ ညီညီအောင်လည်း အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ အိအိ စုတ်ပေးတာထက် လီးစုတ်ကျွမ်းနေပြီးသား ဒေါ်ခင်ပရဲ့ အ စုတ်က ကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် အိုးအီး….ရှီး….အားအား….လို့ မြည်တမ်း ညည်းတွားရင်း မျက်နှာကိုမော့ မျက်လုံးတွေ ပိတ်ရင်း အစုတ်ခံလျက် နေသည် ။ တချက်တချက် ဒေါ်ခင်ပရဲ့ လျာနဲ့ မွှေလိုက်တဲ့ အခါ သူ့တ ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရသည် ။ အိုး…အားပါး…..အီး……..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ မမရယ်……လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ညီညီအောင်လည်း စုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲ ဒေါ်ခင်ပ ပါးစပ်ထဲကို သူ့လီးတန်ကြီးကို ကော့ထိုးလိုက်သည် ။
ဒေါ်ခင်ပလည်း နှာစိတ်တွေ တအား ထပြီး ခံချင်စိတ်တွေက ထိန်းလို့ မရအောင်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေတော့ လီးစုတ်တာ ကို ရပ်လိုက်ပြီး လိုးပေးပါတော့ မောင်ရယ် လို့ တောင်းခံလေသည် ။ ညီညီအောင်မှာလည်း တအား ထန် တအားလိုးချင်နေတဲ့သူမို့ နှစ်ယောက်စလုံး ချက်ချင်းဘဲ ပက်လက်လှန်ချ ပေါင်ကားပေး အပေါ်က တက်ခွ ကြပြီး လိုးကြလေသည် ။ စောက်ရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ပ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့လီးထိုးစိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်..ဒေါ်ခင်ပလည်း “ အင်းဟင်းဟင်း…” လို့ ညည်းငြူလိုက်ရင်း ပေါင်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးပြီး သူမ ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကို အပေါ်ထောင်ပေးလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်လည်း မညှာတမ်း အသားကုန် လိုးဆောင့်ထည့်လေသည် ။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ ညီညီအောင်ရဲ့ ဂွေးစိနှစ်လုံးက ဆောင့်ချက်အတိုင်း ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ဖင်ကြား ကို တဘတ်ဘတ်နဲ့ ရိုက်ခတ်နေသည် ။ “ ဖင်ကို ကိုင်ပြီး လိုးပါလား..မောင်…” ဒေါ်ခင်ပက အောက်ကနေ ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ကော့ပေးရင်း ပြောလိုက်လို့ ညီညီအောင်လည်း ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ကိုယ် အောက်ထဲကို လက်သွင်းရင်း ဖင်တုံးကြီးတွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ရင်း ဖိဖိဆောင့်ပေးတော့ ဒေါ်ခင်ပ လည်း တအားအား အော်ညည်းရင်း အရသာတွေ့နေသည် ။
စိတ်တူကိုယ်တူ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း ဆွဲလိုက်ကြတာ အရှိန်မြန်သထက် မြန်လာသည် ။ အရည်ရွှဲတဲ့ ဒေါ်ခင်ပ ကြောင့် ဖွတ်ဖွတ် ဖပ်ဖပ် အသံတွေ တအား ထွက်နေသည် ။ ညီညီအောင်လည်း ဒေါ်ခင်ပ ပြီးအောင် လုပ်ပေးချင်နေပေမယ့် လိုးရတာ တအားကောင်းနေလို့ ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာသည် ။ ဒါကြောင့်..“ ပုံစံပြောင်းရအောင် မမ…” လို့ ပြောရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို ဒေါ်ခင်ပ စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲနုတ်လိုက်သည် ။ ဒေါ်ခင်ပမှာ ခံလို့ကောင်းဆဲ ရုတ်တရက် လီးတန်ကြီးကို သူမစောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်သွားလို့ “ အို..ဘာလို့ ထုတ်လိုက်တာလဲကွာ…” လို့ မကျေနပ်တဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပေမယ့် ညီညီအောင် သဘောကျ ဘယ် လိုပုံစံကို ပြောင်းပေးရမလဲ လို့ မေးလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်လည်း လေးဖက်ထောက် ကုန်းပေးမလား မမ..လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်ခင်ပလည်း ညီညီအောင့် အလိုကျ လေးဖက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်သည် ။ ညီညီအောင်လည်း ဖင်ကုန်းပေးထားတဲ့ ဒေါ်ခင်ပကို ကြည့်ရင်း ဖင်အနောက်တည့်တည့်မှာ နေရာယူလိုက်သည် ။
ဖြူဖွေးပြီး ကားနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ပရဲ့ ဖင်တုံးလှလှကြီးတွေက ကုန်းထားလို့ ဖင်ကြားက စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပြူးထွက်ခါ နေသည် ။ ညီညီအောင်လည်း လိုးမယ် ကြံပြီးခါမှ စောက်ဖုတ်အစ်အစ်ပြူးပြူးကြီးကို တွေ့ရတာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ငုံ့ပြီး လျာနဲ့ ယက်ပစ်လိုက်သည် ။ ရှလွတ်ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အောက်ကနေ အထက်ကို ပင့်ကော် ယက်လိုက်တဲ့အတွက် ဒေါ်ခင်ပ တုန်ခါသွားရသည်။ သူမ မျှော်လင့်နေတာက ညီညီအောင်ရဲ့ လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီး ။ ရလိုက်တာက လျာပြားကြီး ။ “ အို့…..မောင်..ဘာလို့ ယက်တာလဲကွာ…ဟင့်ဟင့်…လိုးလေ…….မမ ခံချင်လှပြီ ….ကောင်းနေတဲ့ အချိန်ကြီး သူ က ပုံစံပြောင်းချင်တာ..ခုတော့လည်း မလိုးဘဲ လာယက်နေတယ်…တော်ပြီ..မယက်နဲ့..လိုးတော့..” ညီညီအောင်သည် ညုတုတုနဲ့ ပြောနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ပကို သဘောကျပြီး စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တုံး ဖြူဖြူကြီးကို လက်ဝါး နဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ် ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်သည် ။
“ အိုး….ဘာလို့ ရိုက်တာလဲ..ဟင့်…” ညီညီအောင်လည်း ဖင်တုံးလှလှကြီးတွေကို တဖျန်းဖျန်းနဲ့ ရိုက်ထည့်နေပြီးမှ သူ့လီးတန် ထိပ်လုံး ဒစ်ကားကြီးကို ဒေါ်ခင်ပ စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပြီး ဖိသွင်းထည့်လိုက်သည် ။တောင်ပေါ်က ရွာပုန်းကို ရှင်းလင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ညီညီအောင်သည် ဒေါ်ခင်ပတို့ရဲ့ ကျွန်းတောကုန်းရွာမှာ အမြဲလို ရှိနေသည် ။ ကျွန်းတောကုန်းရွာသည် သူ့ရဲ့ စတဲချရာ ရွာ ဖြစ်လာသည် ။ ရွာပုန်းကို ရှင်းလင်းပစ်လိုက်တဲ့ သတင်းကလည်း သည်နယ်တဝိုက်မှာ ပြန့်သွားတော့ သူ့ကို ရွာတွေ အားလုံးက ကြောက်ကြ သည် ။ သည်လို အရှိန်နဲ့ ကြောက်ရွံတာကို ညီညီအောင် သဘောကျသည် ။ ကျေနပ်သည် ။ သူ့စကားဆို တခွန်းဘဲ ။ အားလုံးက ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် လန့်ကြပြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်း လုပ်ကြသည် ။ ကျွန်းတောထဲက ဘိုတဲကြီးကို ဒေါ်ခင်ပရဲ့ သမီး အိအိကို ခေါ်ပြီးကောင်းကောင်းကြီး စပ်ယှက်သည် ။ အိအိကလည်း ညီညီအောင်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ချိန်း တွေ့ပြီး စပ်ယှက်ခဲ့တာမို့ အတွေ့အကြုံက များနေပြီး မရှက်မကြောက်တော့ဘဲ သည် ဘိုတဲကြီးဆီကို လာလာပြီး ကုန်းသည်…..